New mhando tafura pamusoro Mochi / Ice cream Mochi kubudiswa muchina zvakakodzera kuita zvakasiyana-siyana stuffed Cookies dzakadai Mochi / kibbeh / kubba / coxinha / maamoul / date nemizariro / chihenge / meatball / riceball Nezvimwewo
Zvichaita kupedza dzichiumbwa chimiro uye wedzera achizadza panguva imwecheteyo, hapana kuva rinokosha munhu kuwedzera zvekupfakira. kuderedza zvikuru kushanda uye zvinowedzera kugadzirwa kunyatsoshanda.
Normal capacity: 10 ~ 60pcs / Maminitsi
Product uremu: 8 ~ 150g / yori
Power: About 1.0kw, 220V, 50 / 60Hz, Single danho.
Divi: 80 (L) * 76 (W) * 122 (H) CM
Divi pashure yakazara: kumativi 102 * 68 * 116CM
Machine uremu: About 150kg
Volume: No kupfuura 1CBM,
Table mhando, nyore kugadzwa, kuchenesa, vachibvisa uye kuunganidza.
High yepamusoro zvokunyama, Stainless simbi 304 yose muchina.
Vose kukura uye chimiro zvigadzirwa zvinogona chinjika.
Nyore kudzora kurema zvinodiwa uye pakukora mukanyiwa.
Videos, kurayira mabhuku uye mumwe chakuvhuvhu nokuda zvinhu zvenyu inowaniswa free.
Pretty chakanaka nechitarisiko uye irambe kushanda ezvinhu.
Converter chakaitwa Delta.
Previous: Small chinzvimbo maamoul dzaFord
Next: Small nastar nokuparira Machine
Automatic Mochi Ice Cream Ndakasarudza Machine
Ice Cream Mochi Kuita Machine
Mochi Cake Kuita Machine
Mochi Achigadzira Machine
Mochi Ice Cream Achigadzira Machine
Mochi Ice Cream Ndakasarudza Machine
Mochi Kuita Machineencrusting Machine
Mochi Kuita Machinery
Mochi richigadzirisa Machine
Small Mochi Achigadzira Machine
Small Mochi Kuita Machine
otomatiki coxinha encrusting Machine
Small akazara Cookies nokuparira Machine
Desktop simba bhora Anoumba muchina
Miduku otomatiki meatball fishball Anoumba ...